CNC Router Cutting Machine Factory - Mpanamboatra milina fanapahana lasibatra cnc China, mpamatsy
1530 Masinina sokitra CNC
Shenya CNC famokarana matihanina sy varotra Camera patrol sokitra sy fanapahana milina fanaovana sokitra milina, milina sokitra vato, hazo sokitra milina sy ny fomba hafa ny sokitra milina, misy manokana teknika fikarohana sy fampandrosoana ekipa. Rafitra firafitry ny vatan'i Shenya CNC amin'ny fantsom-batana amin'ny alàlan'ny fantsom-by fantsom-boaloboka avo lenta, ny fitsaboana famonoana olona, ​​ny firafitry ny rafitra geometrika, ny fahaiza-mitondra matanjaka, ny fiovana kely, maharitra; mampiasa algorithm faminaniana manan-tsaina tsy manam-paharoa, manome ny lalao feno ny mety ho an'ny maotera, mahatratra milina haingam-pandeha, fampifanarahana tsipika mahitsy, fihodinana malama; fitoniana tsara kokoa. Fifanarahana rindrambaiko; mifanaraka amin'ny famolavolana CAD / CAM isan-karazany sy rindrambaiko famokarana toy ny Type3, Artcam, Castmate, ary Wentai.
Masinina sokitra 1325 CNC